Guddiyada doorashooyinka iyo kan xalinta Khilaafaadka oo ka walacsan eedaynaha wax is daba-marinta doorashooyinka | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Guddiyada doorashooyinka iyo kan xalinta Khilaafaadka oo ka walacsan eedaynaha wax is...
Guddiyada doorashooyinka iyo kan xalinta Khilaafaadka oo ka walacsan eedaynaha wax is daba-marinta doorashooyinka
Guddiyada GFHDD iyo GXKHDD waxay hoosta ka xarriiqayaan horumarka illaa iyo hadda laga gaaray geeddi socodka doorashada ee 2016ka.
Codaynta kuraasta Aqalka Hoose waxay ku dhowdahay gabagabo, waxaana qabsoomay doorashada qiyaastii in ka badan 40% boqolkiiba kuraasta Golaha Shacabka.
Geeddi socodka guud wuxuu illaa iyo hadda u dhacay si nabadgelyo iyo kala dambayn leh, marka laga reebo dhacdooyin teel teel ah oo ka dhacay Jowhar, Baydhabo, Cadaado iyo Kismaayo.
Eedeymahaas waxaa ka mid ah:
hanjabaado iyo cagajuglayn loo geystay xubno ka tirsan guddiyada maaraynta doorashooyinka iyo musharraxiin, isdaba marin lagu sameeyey liisas ergo iyo musharraxiin, ku takrifal hatni dowladeed (waxaa ka mid ah adeegsiga xubno ka tirsan hay’adaha amniga) si loogu roonaado musharraxiin baarlamaan qaarkood, loogana hormariyo kuwo kale, iyo adeegsiga hanti iyo awood ciidan oo gaar loo leeyahay si loogucagajugleeyo loona quusiiyo qaar ka mid ah musharraxiinta iyo ergada.
Tallaabooyinkaas, waxay noqon karaan in la laalo (la baabi’iyo) natiijooyinka doorasho iyo in tartanka laga reebo musharraxiinta geysatay waxisdabamarin.
Waxaa labada guddi, walaac gaar ah ka muujinayaan in beelaha qaarkood aanay u hoggaansamin go’aannadii Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ) ee ahayd in la hirgeliyo qoondada haweenka 30% iyadoo mid ka mid ah saddexdii kursiba ama kuraasta ay wadaagaan beeluhu loo asteynayo haweenka.
Xeerkan waa in lagu tixgeliyaa dhammaan doorashooyinka socda. Haddii sidaas la sameyn waayo, waxaa ka dhalanaysa in guddiyada GFHDD iyo GXKHDD ay tallaabo ka qaadaan beelaha aan raacin nidaamka qoondada, kuwa horay u sameeyay ama kuwa sidaas samayn doona doorashooyinka soo socda.
Guddiyadu, waxay mar kale ku celinayaan sida ay lagama maarmaanka u tahay in dhammaan dhinacyada ay khuseyso arrinta doorashada inay u hoggaansamaan xeerarka iyo nidaamyada geedi socodka doorashadooyinka 2016ka, sida ay qeexeen iskuna raaceen Madasha Hoggaanka Qaran (MHQ)
Previous articleWafdi QM iyo Guddiga Doorashooyinka ka socda oo gaaray Kismaayo iyo Cadaado
Next articleProf. Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Afar xildhibaan oo maanta lagu doortay Baydhabo